Abavelisi be-fiber optic abavelisi kunye nabaxhasi - China iFibre Optic Adapter Factory
Iadaptha ye-fiber optic enye ebizwa ngokuba yi-fiber optic coupler sisixhobo esincinci esisetyenziswa kwiinkqubo zefayibha enombala kunye nefayibha yokufaka enye okanye nangaphezulu kunye nefayili enye okanye ezininzi zemveliso. Iadaptha ye-fiber optic ivumela iintambo ze-fiber optic patch ukuba ziqhotyoshelwe enye kwenye okanye kwinethiwekhi enkulu, ivumela izixhobo ezininzi ukuba zinxibelelane kwangoko. Isasazeke ikakhulu, isetyenziswa ngokubanzi kumgca wokuhambisa ugqithiso lwefayibha kunye nonxibelelwano lokugqibela lomsebenzisi wokugqibela.
I-adaptha zeJera zefayibha zinokufakwa kwiindidi ezahlukeneyo zezihlanganisi ezibonakalayo kumacala omabini eadaptha yefayibha yokubona ukuguqula phakathi konxibelelwano olwahlukeneyo olunjengeFC, SC, ST, E2000, MPO, MTP, MU njl.
IJear ibonelela ngemveliso epheleleyo yefayibha yeadaptha enombala ophakamileyo, ozinzileyo kunye nexabiso lokhuphiswano. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ukuze ufumane iinkcukacha ezithe kratya malunga neadaptha.
Iadaptha zeFiber optic, Imowudi enye